Iindaba-COVID-19 IMEKO INGXELO
I-coronavirus luhlobo lwentsholongwane eqhelekileyo ebangela usulelo empumlweni yakho, kwiizono, okanye kumqala.Uninzi lwe-coronavirus azikho yingozi.
Ekuqaleni kuka-2020, emva kokuqhambuka kukaDisemba ka-2019 e-China, uMbutho wezeMpilo weHlabathi wachonga i-SARS-CoV-2 njengohlobo olutsha lwe-coronavirus.Uqhambuko lwasasazeka ngokukhawuleza kwihlabathi liphela.
I-COVID-19 sisifo esibangelwa yi-SARS-CoV-2 esinokubangela oko oogqirha bakubiza ngokuba lusulelo lwendlela yokuphefumla.Inokuchaphazela indlela yakho yokuphefumla ephezulu (izono, impumlo, nomqala) okanye indlela esezantsi yokuphefumla (uqhoqhoqho kunye nemiphunga).
Isasazeka ngendlela efanayo nezinye ii-coronavirus, ikakhulu ngokunxibelelana nomntu.Usulelo lusuka koluncinci lufikelele ekubulaleni.
I-SARS-CoV-2 yenye yeentlobo ezisixhenxe zekoronavirus, kubandakanywa nezo zibangela izifo eziqatha njenge-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kunye ne-Acute Respiratory Syndrome (SARS).Ezinye ii-coronavirus zibangela uninzi lweengqele ezisichaphazelayo apha enyakeni kodwa ayisosisongelo esiyingozi kubantu abasempilweni.
Ngalo lonke eli bhubhane, izazinzulu ziye zajonga kufutshane kwizinto ezahlukeneyo ezifana:
Iza kuhlala ixesha elingakanani i-coronavirus?
Akukho ndlela yakuxela ukuba ubhubhane uya kuqhubeka ixesha elingakanani.Zininzi izinto, eziquka iinzame zoluntu zokucothisa ukusasazeka, umsebenzi wabaphandi ukufunda ngakumbi ngentsholongwane, ukukhangela kwabo unyango, kunye nempumelelo yezitofu zokugonya.
Iimpawu eziphambili ziquka:
Ukugodola, ngamanye amaxesha ngokungcangcazela
Ukulahleka kwevumba okanye incasa
Intsholongwane inokukhokelela kwinyumoniya, ukusilela kokuphefumla, iingxaki zentliziyo, iingxaki zesibindi, umothuko wegazi, nokufa.Uninzi lweengxaki ze-COVID-19 zinokubangelwa yimeko eyaziwa ngokuba yi-cytokine release syndrome okanye isaqhwithi se-cytokine.Oku kuxa usulelo lubangela amajoni akho omzimba ukuba akhukulise igazi lakho ngeeproteni ezidumbayo ezibizwa ngokuba zii-cytokines.Ziyakwazi ukubulala izicubu kwaye zonakalise amalungu akho.Kwezinye iimeko, kuye kwafuneka uqhaqho-fakelo lwemiphunga.
Ukuba ubona ezi mpawu zilandelayo kuwe okanye kothandekayo, fumana uncedo lwezonyango ngoko nangoko:
Ingxaki yokuphefumla okanye ukuphefumla kancinci
Iintlungu zesifuba eziqhubekayo okanye uxinzelelo
Awukwazi ukuvuka ngokupheleleyo
Imilebe eluhlaza okanye ubuso
Iistrokes zikwaxeliwe kwabanye abantu abane-COVID-19.Khumbula FAST:
Ubuso.Ngaba elinye icala lobuso bomntu lindindisholo okanye lijinga?Ngaba uncumo lwabo luvalekile?
Iingalo.Ngaba enye ingalo ibuthathaka okanye indindisholo?Ukuba bazama ukuphakamisa iingalo zombini, ngaba ingalo enye iyaxega?
Intetho.Ngaba bayakwazi ukuthetha ngokucacileyo?Bacele ukuba baphinde isivakalisi.
Ixesha.Umzuzu ngamnye ubala xa umntu ebonisa iimpawu zestrowuku.Fowunela u-911 ngoko nangoko.
Ukuba wosulelekile, iimpawu zinokuvela kwiintsuku nje ezi-2 okanye kangangeentsuku ezili-14. Iyahluka kumntu nomntu.
Ngokwabaphandi baseTshayina, ezi yayizezona mpawu zixhaphakileyo phakathi kwabantu ababene-COVID-19:
Ukunqongophala kokutya 40%
Ukuphefumula kancinci 31%
Abanye abantu abalaliswe esibhedlele ngenxa ye-COVID-19 banamahlwili egazi ayingozi, kubandakanya imilenze, imiphunga kunye nemithambo.
Yintoni omawuyenze ukuba ucinga ukuba unayo
Ukuba uhlala okanye uye kwindawo apho i-COVID-19 isasazeka khona:
Ukuba awuziva kakuhle, hlala ekhaya.Nokuba uneempawu ezibuthathaka njengentloko ebuhlungu kunye neempumlo ezivuzayo, hlala ngaphakathi de ubengcono.Oku kuvumela oogqirha ukuba bagxile kubantu abagula kakhulu kwaye kukhusele abasebenzi bokhathalelo lwempilo kunye nabantu onokuthi udibane nabo endleleni.Ungakuva oku kubizwa ngokuba yi-self-quarantine.Zama ukuhlala kwigumbi elahlukileyo kude nabanye abantu ekhayeni lakho.Sebenzisa igumbi lokuhlambela elahlukileyo ukuba unako.